XUDUUDAHA JACK DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Xuduudaha Jack Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Xudduudka Collie / Jack Russell Terrier Isku-dhafka Eeyaha
'Frisbbe the Border Jack (Border Collie / Jack Russell) 6 bilood kamay weynaanin wax badan tan iyo sawirkan. Waa qiyaastii 30 rodol. Aad u caqli badan sida Xuduudaha Collies iyo Jacks iyo sidoo kale aad u sarreysa sidoo kale. '
min pin iyo rumaanka isku dhafan
Soohdinta Collie Jack
Xudduudka Jack ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Soohdinta Collie iyo Jack Russell Terrier . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Isku-dhafkan ayaa si ula kac ah loogu kariyay isboortiga firfircoonida iyo duulista. Waxay u muuqdaan kuwo aad u kacsan, eeyo mashquul badan oo u baahan dhaqdhaqaaq badan. Maahan milkiileyaasha xayawaanka ah ee cusub, waxay u baahan yihiin dhaqdhaqaaq iyo jimicsi badan oo maalinle ah. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Jollie Jack Russell Terrier / Border Collie wuxuu isku daraa sida eey weyn
Jollie Jack Russell Terrier / Border Collie wuxuu isku daraa sida eey
Taz, a Soohdinta Collie / Jack Russell ey isku dhafan— 'Tani waa Taz. 18 bilood ayuu ku jiraa sawirradan. Waa nin firfircoon, ciyaar badan oo dhaqso badan. Waxay u maleyneysaa inuu yahay bisad qayb ka mid ah. Aad buu u jecel yahay markuu rabo inuu noqdo wuuna istaagi karaa markuu daalana. Aad u feejigan oo xiise leh. Wuxuu jecel yahay inuu soo boodo oo uu qodo godad. Waxay u egtahay dawaco yar oo madow. Wuxuu saaxiibtinimo badan la leeyahay eeyaha kale umana daneeyo bisadaha oo wuxuu jecel yahay carruurta yaryar. Mid kale oo kale - isagu wuxuu ahaa dhagoole ku dhashay . Tani ma aysan aheyn arin marka laga reebo inaanan marnaba ka hari karin inuu hogaamiyo. Wuxuu diirada saari doonaa wax dhaqaaqaya wuuna baxay. Dib uma soo wici karo! Wuxuu aad ugu fiicnaa barashada luqadda dhagoolaha calaamadaha waxaanan ogaanay inuu sidoo kale akhriyo bushimaha. Haddii uusan rabin inuu dhageysto, madaxa ayuu u jeedinayaa si uusan ku arkin. Waxaan ogaanay inuu jecel yahay urta ragga shaqeeya laakiin ma ahan kuwa ku habboon dharka xiran barafka ama haweenka leh cadar culus. Waxaan u maleyneynaa inay tahay sababta oo ah dareenkiisa ur ayaa muhiim u ah isaga maadaama uusan wax maqli karin. '
'Xaqiiqdii isagu waa isku dhaf wanaagsan oo ka mid ah astaamaha labada taran'. Caqli leh oo dhakhso leh oo la mid ah Xuduudaha Xuduudaha. Isku dayaya inuu kaxeeyo eeyo kale oo ka gooyo barta. Wuxuu sidoo kale go'aansaday, kas iyo mashquul wuxuuna leeyahay dareen qeexan oo qosol leh sida Jack Russells. Waxaan u maleyneynaa inuu qurux badan yahay.
cawl iyo caddaan siberian husky
Taz, a Soohdinta Collie / Jack Russell qas ey eyda oo seexanaya dhabarka fadhiga
Liiska eeyaha Jack Russell Terrier Mix Noocyada
shiir cad eeydayda
bulldog Faransiiska isku darka pinscher Ghadafi
noocyada kala duwan ee digaagga dibiga
Merle brown muqisho adhijir Australia
bulldog ingiriisiga iyo isku dhafka god
casaan qori isku dhafan retriever